BlogDay | My Burmese Blog
Posts Tagged: BlogDay	World IPv6 Test Flight Day
On January 1, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Blogging	Wishing Happy New Year 2011 for You!!
BlogDay	Blog Action Day 2010 ~ Water
On October 15, 2010	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Blogging	ဒီနေ့ October 15 ရက်နေ့ဟာ နှစ်တိုင်းလုပ်နေကျဖြစ်တဲ့ Blog Action Day နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွက် title က Water လို့ ပေးထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ကတော့ Climate Change ပါ။ ဒီနှစ်မှာ Blog Action Day အတွက် Change.org ကနေလဲ support လုပ်ပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနှစ် ဒီနေ့မှာ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ 135 နိုင်ငံက blog ပေါင်း 4,693 ကနေ Water ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဘလော့ဂ် ကြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် ဘလော့ဂ်ကလဲ အဲဒီ နံပါတ်ထဲက တစ်ခုပါ။
BAD, BlogDay	Continue Reading
On August 31, 2010	by Htoo Tay Zar	With	4 Comments	- Blogging	ဒီနေ့ August 31 ရက်နေ့က နိုင်ငံတကာ Blog Day နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကို ရေးရင် 31,08 ဆိုတာလေးက Blog ဆိုတဲ့ စာလုံးနဲ့ ပုံစံ ဆင်တာမို့ ဘလော့ဂ်ဒေး လို့ သတ်မှတ်တာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ နိုင်ငံတကာက blog တွေမှာ လဲသူတို့ နှစ်သက်တဲ့ blog အသစ် ၅ ခုကို ပို့စ်တင်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ အရင်နှစ်တွေလိုပဲ အစဉ်အလာမပျက် ပို့စ်တင်တာပါ။ ဒီနှစ်ပါဆိုရင် ကျွန်တော် Blog Day အတွက် ပို့စ်တင်တာ ၄ နှစ်မြောက် ဖြစ်ပါတယ်။
Blog Day, BlogDay	Continue Reading
On March 28, 2010	by Htoo Tay Zar	With	4 Comments	- Blogging, Knowledge	မနေ့က ၂၇ ရက် ည က WWF ကနေ ဦးဆောင်လုပ်တဲ့ Earth Hour Campaign ညဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တောင်းဆိုတာက ကမ္ဘာကြီး အတွက် စွမ်းအင် ချွေတာဖုို့ သတိပေးတဲ့ အနေနဲ့ မနေ့ည နိုင်ငံအလုိုက် စံတော်ချိန် 8:30pm to 9:30pm တစ်နာရီ စာကို မီးပိတ်ထားဖုို့ စခဲ့တာပါ။ အပေါ်က ပုံရယ် ကျွန်တော် အရင် ၃ ရက်လောက်ကတည်းက ပြောင်းထားတဲ့ blog banner မှာလဲ တွေ့ရမှာပါ 60 ဆိုတဲ့ မိနစ် ၆၀ စာကို တောင်းဆိုထားတာ။
BlogDay, Blogging	Continue Reading
February 15 is Happy Single Awareness Day
On February 15, 2010	by Htoo Tay Zar	With	5 Comments	- funny	ဒီနေ့ February 15 ရက်က Single Awareness Day လို့ခေါ်တဲ့ တစ်ယောက်ထဲသမားတွေ (အတွဲ မရှိသူတွေ ) အတွက်နေ့ပါ။ ဘာလို့ Single Awareness Day (SAD) လို့ခေါ်လဲတော့ မရေးတော့ပါဘူး အရင်နှစ်တွေကလည်း ရေးခဲ့ပြီးသားမို့ပါ။ ရည်းစားမရှိလို့ Valentines’ Day မှာ စိတ်ညစ်စရာမလိုပါဘူး။ Single Awareness Day ဆိုတာရှိတာပဲ။ မနေ့က မကုန်ခဲ့တဲ့ ချောကလပ် ဖိုးတွေ၊ လက်ဆောင်ဖိုးတွေကို ဒီနေ့မှာ အသားကုန် ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ဖြုန်းပစ်လိုက်ပါ။ တစ်ယောက်ထဲနေရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ သိသွားလိမ့်မယ်။ သိလား One better than Two & Happy Single Awareness Day!!
BlogDay	Continue Reading
On December 2, 2009	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Knowledge	မနေ့က ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ World AIDS Day မှာ တစ်ခုခုလုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးမိတာနဲ့ ပထမဆုံး ဘာလုပ်မလဲစဉ်းစားရင်း အကြံရတာနဲ့ စပြီး phone ကနေ SMS message တစ်ခုကို ရေးပြီး သူငယ်ချင်းတွေ၊ အသိမိတ်ဆွေတွေ ဆီကို ပို့ပါတယ်။ နောက် messages ပို့ပြီးပြီးချင်း post တင်ဖို့ စဉ်းစားပေမယ့် မနေ့က ညပိုင်းအထိမအားပဲ ဖြစ်သွားတာကြောင့် ဒီနေ့မှ တင်ဖြစ်ပါတယ်။ မနှစ်ကလိုတော့ အချိန်သိပ်မပေးနိုင်တော့လို့လဲ messages ပဲ ပို့ဖြစ်တာ ပါပါတယ်။
On October 18, 2009	by Htoo Tay Zar	With	4 Comments	- Blogging, Knowledge	ဒီလ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့က Blog Action Day 2009 အတွက် နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ Blog Action Day 2009 ကို ကမ္ဘာအနှံ့က Blog ပေါင်းများစွာက နှစ်တိုင်းပါဝင်ပြီး အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာလဲ ပါဝင်တဲ့ blog တွေက Google Blog, White House.gov, Mashable, Typepad, Live Journal, TUAW စတဲ့ blog နဲ့ အခြား နာမည်ကြီး ဆိုဒ်တွေ ပါဝင်ကြပါတယ်။ မနှစ်ကတော့ ခေါင်းစဉ်က Poverty ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒီနှစ် အတွက်ကတော့ Climate Change ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲ နှစ်တိုင်းရေးနေကြအတိုင်း တတိယမြောက် Blog Action Day ပို့စ် အဖြစ် Climate Change ကို နည်းပညာ အကြောင်းအရာ ဘက်နဲ့ နွယ်ပြီး ရေးပါရစေ။ အမှန်တော့ ဒီနေ့က ၁၇ ရက်နေ့တောင်ဖြစ်နေပြီး နောက်တောင်ကျနေပါပြီ စာမေးပွဲရှိတာနဲ့ အင်တာနက် မရှိတဲ့ နေရာ ရောက်နေခဲ့တာကြောင့် နောက်ကျနေခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့တော့ အမှီရေးလိုက်ပါတယ်။
BlogDay, Blogging, Knowledge	Continue Reading
On August 30, 2009	by Htoo Tay Zar	With	8 Comments	- Blogging	ဒီနေ့ August 31 က နိုင်ငံတကာက blog တွေ စုပေါင်းပြီး လုပ်လေ့ရှိတဲ့ Blog Day ပါ။ ဒီနှစ်နဲ့ ဆိုရင် Blog Day ဆိုတာကို စလုပ်ခဲ့တာ ၅ နှစ်ရှိပြီ… ကျွန်တော်လဲ တစိတ်တပိုင်း အနေနဲ့ ပါတာ တတိယမြောက်နှစ်ပေါ့… Blog Day အကြောင်းပြောရရင် မပြောတော့ပါဘူး Blog Day ဆိုဒ်မှာသာ ဖတ်ကြည့်ပါတော့.. ဘာပဲပြောပြော blogDay initiator Nir Ofir ရဲ့ အိုင်ဒီယာကို သဘောကျပါတယ် 31 ရယ် 08 ကို ပေါင်းထားတဲ့ 3108 ဆိုတာလေးကို သဘောကျပါတယ်..
Woolwich killing: meat cleaver, knife and jihadist claims filmed on mobile #UK guardian.co.uk/uk/2013/may/22… 14 hours ago
Microsoft unveils its next game console, the Xbox One HD flip.it/8v9Cu2days ago